TRANOMBAROTRA IRAY NISY NANAFIKA TAO AMBILOBE : Vola mitentina 50 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy, olona roa naratra
Nirefodrefotra ny basy, ny alatsinainy hariva, tokony ho tamin’ny 5 ora sy 10mn teo ho eo, tao amin’ny fokontany Anoronala kaominina ambonivohitra Ambilobe. 17 avril 2019
Tranombarotra sy fandraisam-bahiny iray no lasibatry ny andian-jiolahy mirongo basy miisa 6 ka nahalasana vola mitentina 50 tapitrisa ariary sy firavaka volamena sy volafotsy. Voatifitr’ireto jiolahy ny tompon’ilay Tranombarotra fantatry ny maro amin’ny anarambositra hoe Aly Ibus ka naratra mafy ary voatery nalefa notsaboina any amin’ny hopitaly manara-penitra any Antsiranana.
Voakapoka ihany koa ny vadiny tamin’ny fakan’ireo jiolahy ny firavaka teo amin’ny vatany. Araka ny nambaran’ity farany, tampoka tamin’izy ireo ny fanafihana nataon’ireo jiolahy. « Nipetraka teo ivelan’ny hotely izahay ary tsy nisy nanampo ny fanafihana nataon’ireto jiolahy ireto. Tsy nisy nisaron-tava ireto farany ary nandrahona anay avy hatrany. Avoahy ny vola 3 miliara fa raha tsy izay vonoinay eto ianareo, », hoy ireo jiolahy, araka ny fanazavana nataon’ny vadin’i Aly Ibus. Niditra tao amin’ny tranombarotra i Aly Ibus ka narahan’ny jiolahy miisa 4 ary nodarohan’ireto farany. Tsy vitan’izany notifirin’izy ireo i Aly Ibus ka voa teo amin’ny soroka sy ny faritra misy ny sofiny.
Misesisesy ny fanafihana
Araka ny loharanom-baovao, nitrangana fanafihana mitam-piadiana misesesy tato ho ato tao an-tampon-tanànan’Ambilobe. Tsy latsaky ny telo, araka ny fantatra ireo mpandraharaha voatafika tato anatin’ny iray volana mahery. Anisan’izany ny fanafihana mpandraharaha teratany karana iray tompon’ny Tranombarotra iray manoloana ny tobin-tsolika « Total » ka nahalasana vola tsy latsaky ny 14 tapitrisa ariary sy mpandraharaha iray antsoina hoe Faby eny amin’ny fokontany Laidama.
Araka ny fahitan’ireo mpanara-baovao any an-toerana ireto andian-jiolahy ireto ihany no ambadika ireny fanafihana misesisesy ireny. Nilaza ireo tompon’andraikitra ao amin’ny polisim-pirenena fa tsy hitsitsy amin’ireo jiolahy manao fanafihana mitam-piadiana ary miangavy ny fiaraha-miasa amin’ny mponina. Nanome toky izy ireo fa tsy maintsy tratra ireto jiolahy ireto.